トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Pa onendawo imeko yokudlala kwaye lokukhuthazwa losuku lweveki holiday
Kwi pa parlour, iza kwahlulwa ibe kwisitora ukubonisa ezixhasayo ukuya kwiivenkile kunye veki ukubonisa ezixhasayo evekini. In nesendlu pa efanayo, kutheni kukho umahluko onjalo ephuma, siza kujonga ukuba mna Mikiwamere ukuba nomdlandla nayiphi na indawo. Pa parlour ukubonisa ezixhasayo ukuya evekini, ngokufuthi sigcina oko kunoyolo neemeko indawo.
umzekelo, awuqalanga ubudlelwane ivenkile olungileyo phambi kwiivenkile zesikhululo kunye usuku lweveki.
Iivenkile ezifana pa, yaye abaninzi wayicola umthengi oya kuya evekini ezininzi, kukho umkhwa ukuzama ukuba nditsale. Abathengi abeza evekini, xa kuthelekiswa ngabathengi Akufuni ukuza-veki kuphela, kufuneka kwakhona izixa ezahlukeneyo mihla kuqhubeka ukutyala kuthi. Good pa onendawo yokusebenza evekini, phinda wabuya wachacha ngokunciphisa evekini zabathengi, ukwenza wena, ukuqinisekisa intengiso ezizinzileyo ingeniso epheleleyo kunye nokusebenza.
loo nto, kodwa izidanga ezimbalwa phakathi evekini, ukuze siwenze ishishini ukubonisa ezixhasayo.
Noko ke, kubonakala ukuba nzima kakhulu ukuza kukuxelela. Evekini, ngenxa yokuba kukho iintsuku ezi-5 ngeveki, kunokuba kucinywa zonke ngaxeshanye, usenokuba eze kancinane nokupha kancinane. Kwimeko enjalo, nawo ahlaselwa nezikhonkwane hlengahlengiso, Horukon sentlalo, uza kuphinda ukubona kuphela naloo ROM na imeko. Ngaba ukuya losuku lweveki iintsuku ezimbalwa, awuyi kuba nako ukufumana zeveki kushukunyiswa.
Noko ke, loo elibe pa, ngoko veki nangeeholide iza kuba kukuqinisekisa ukuba mini ukuqokelelwa, ngubani na ayibhuqwanga Ndicinga ukuba kukhuselekile.
ukulungisa, kodwa i pa parlour ukubonisa ezixhasayo ukuya ngeMigqibelo nangeeCawa, liya kufana kakhulu, nesendlu pa noovimba ipoma ukuba abakwazi ukuba umsebenzi ozinzileyo. Ekubeni
ngoMgqibelo nangeCawa ngumhla kunyuka ukusebenza ngokwendalo, ngokuqhelekileyo kukuba eyisingela angalulama eqhelekileyo, kukuba elibe pa ukuba kuyenzeka imeko akangekhe. Ithetha ukuba into yokuba kufuneka sibonise izizathu ukuya ngeMigqibelo nangeeCawa, ngemini ngeempelaveki abantu babutha, oko kunxibelelene LWEVEKI nalamazwe bahle Ngenxa yokuba kukho ngokomzekeliso.
Kwimeko enjalo, elibe pa, okanye engcono inkonzo ngeMigqibelo nangeeCawa, okanye zama ukulungisa umvuzo limited, unga ukubona imizamo ngakumbi intlawulo. Zesibheno ixesha kukho zizizathu, ngaphezu nesendlu pa ukubonisa ezixhasayo phakathi evekini, ndicinga ukuba lula ukuyiqonda. Ngaphezu koko, ngeMigqibelo nangeeCawa kukho iintsuku ezimbini kuphela. Ngenxa yokuba inguqulelo nesibheno zizizathu lula ukuqonda Okwangoku, simele siye yogwayimbo ejoliswe iintsuku ezimbini ngoMgqibelo nangeCawa. Xa sele unawo injongo, ngaphantsi losuku lweveki nokubaleka, ndicinga ukuba abantu nesendlu pa lokukhupha zizizathu ngeempelaveki liyaphumelela Ipesenti inyuswe.
pa parlour kwenkuthazo, iinkonzo kunye amabhaso ukongezelela ibhola ngaphandle, inqanaba zokupapashwa iiphowusta kunye ezifana, kukho inxalenye ukuze sibonwe ukususela ngaphandle. Pa parlour ukuba ndiye ukudlala, wena ngaphandle izizathu kuzo zombini zeveki kunye neeholide, indawo apho isisusa sibonakala kukuba Akumangalisi apho.